Vakoka – fanilo
Kolontsaina sy Politika: Mpivady tsy afa-misaraka
Isan'ny sehatra iray zary lasa maka sisiny eto amintsika amin'izao fotoana izao ny kolontsaina. Marobe rahateo ireo kolontsaina avy any amina firenen-kafa izay nifandona tamin'ny kolontsaintsika ka rehefa hita fa resy tosika moa izany ny an'ny tena dia somary naka sisiny aloha saingy ny olana dia izy mbola tsy nety tena tafaverina an-kianja hatramin'izao. Hain-dehiben'ny firenena anefa ny kolontsaina satria mila tsara kolo ny sain'ireo mpitondra eto mba tsy ho sanatria ho arafesina ka tsy hahavita hanao jery lavitra ny fitantanana ny firenena fa hitady vahaolana vonjimaika lava izao.
Gidro Varika: Ringana afaka 20 taona raha tsy tandremana fatratra
Harem-pirenena mampiavaka antsika ny Varika. Miisa 113 no karazana��ity gidro ity, izay tsy misy afa-tsy eto Madagasikara, izany hoe mamaritra ny 20% ny karazan-gidro misy eto amina��izao tontolo izao kanefa 0,4% amina��ny velaran-tanina��izao tontolo izao no velaran-tanintsika...
Anatirova: Mitahiry ny tantara ho ana��ireo mpitsidika
Raha ny tokony ho izy, tafiditra ao anatina��ny tantara ny mahakasika ny Rovana��i Manjakamiadana. Heverinay eto amina��ny Faribolana Fanilo anefa, ny tokony hanaovana��ny Malagasy teratany zahantany voalohany eny amina��ny Rova, izao vao mihisaka tsikelikely any amina��ny Faritra raha toa ka eto an-kibona��Imerina na eto an-drenivohitra izy no mitoetra. Tsy ny antsipiriany na ireo tsy maintsy hidirana lalina no ilozoantsika fa ireo tsara ho fantatra.